ठेक्का अवधि सकियो,जडान भएन अक्सिजन प्लान्ट - नेपालबहस
ठेक्का अवधि सकियो,जडान भएन अक्सिजन प्लान्ट
२६ जेठ २०७८ | १०:३१:२१ मा प्रकाशित
२६ जेठ,जाजरकोट । ठेक्का अवधि सकिए पनि जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा अझै अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छैन । अक्सिजन प्लान्ट जडान नहुँदा जटिल अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई जिल्लाबाहिर सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उनका अनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसके बढीमा पाँच दिनसम्म समय थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । थप गरिएको समय पनि गुज्रिएपछि ठेकेदारले थप समय माग गरेको उनले बताए । नेपटेकका प्रोप्राइटर नरबहादुर लिम्बूले जेठ मसान्तभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिने बताए । थपिएको समय पनि सकिएकाले ठेकेदारलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । समयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान नगर्दा कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन दिन समस्या भएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत ओसरसिंह राठोरले बताए ।
अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा नगरप्रमुखको १० लाख सहयोग २ हप्ता पहिले
प्याव्सन धनगढी परिवारद्वारा मेयर कल्याणकारी कोषमा सहयोग ४ हप्ता पहिले
कैलालीमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिने ४ हप्ता पहिले
सुध्रिएन खर्च प्रणाली, रोकिएन असारे विकास ४२ मिनेट पहिले
बन्दाबन्दीमा वन्यजन्तुको खुलेआम चोरी शिकार १ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञा लागू भएसंगै किसानले पाएनन् मल ३ हप्ता पहिले
आजदेखि अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयर बिक्री खुल्ला २ हप्ता पहिले
पोखरामा लक डाउनको प्रभाव १ वर्ष पहिले
भारतमा कोभिड संक्रमित घट्न थाले, नयाँ कति फेला थपिए ? १ महिना पहिले
प्युठानमा व्यावसायिक नेपाली कागज उत्पादन ११ महिना पहिले
लकडाउन कति बढ्ला ? १ वर्ष पहिले